कैसीनो होल्डम लक्ष्य डेलरको हातलाई हराउन हो। शुरुवातमा दुई खेलाडी र डेलर दुई कार्डहरू प्राप्त गर्छन्। अर्को5फ्लप कार्डहरू खेलमा निस्कन्छन्। उत्तम पोकर हात जित्छ। हात मानक हो र पाँच कार्डहरू समावेश छ। जबसम्म प्रत्येक खेलाडीको आफ्नै दुईवटा कार्ड छ र पाँच-साझा गरिएको छ, मात्र यी सातबाट पाँच को संख्यामा उच्चतम संयोजन हुन्छ। हातहरू खेलको अन्त्यमा तुलना गरिन्छन्।
कैसीनो होल्डम एक मानक 52 कार्ड डेक संग खेलेको छ, प्रत्येक खेल पछि मिश्रित। यस श्रृंखलामा कार्डको ताकत उच्चतम र निम्न भन्दा कम हुन्छ: ऐस (ए), राजा (के), रानी (क्यू), जैक (जे), एक्सएनमक्स, एक्सएनएक्सएक्स, एक्सएनएक्सएक्स, एक्सएनक्स, एक्सएनक्स, एक्सएनक्स, एक्सएनक्स, एक्सएनक्स, एक्सएनक्स र एक्सएमक्सक्स। केहि विशिष्ट अवस्थामा, एस संख्या 10 भन्दा कम, कम से कम कार्ड बन्न सक्छ। सबै सूटहरू - हृदय, काँध, हीरा र क्लबहरू - समान छन्।
क्यासिनो होल्डमले एन्ट शर्तको साथ सुरु हुन्छ। तपाइँ यस शर्तसँग खेल प्रविष्टि गर्नुहोस्। जब तपाईंको अन शर्त शर्तको लागि तैयार छ, कार्डहरू सम्झाउन सम्झौता बटन धकेल्नुहोस्। पहिलो चरण तपाईंको लागि दुई अनुहार कार्डहरू प्राप्त गर्न, दुई लुकेको छ - व्यापारीको लागि र तीन फ्लप कार्डहरू - फेरि अनुहारहरूसँग।
तपाईंको दुई कार्डहरू र तीन "फ्लप" कार्डहरू प्राप्त गरे पछि, तपाईंले आफ्नो हातको मूल्यांकन गर्न र निम्नका बीच छनौट गर्नुपर्छ:
फोल्ड - केवल फोल्ड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्; तपाईं आफ्नो अनन्त शर्त हराउनुहुन्छ र खेल समाप्त भएको छ।
अतिरिक्त कल शर्तको साथ जारी राख्न को लागी उठाउने बटन क्लिक गर्नुहोस्, दुई पटक बराबर एन्ट शर्तको बराबर। अर्को दुई फ्लप कार्डहरू लागू हुन्छन्।
जब सबै पाँच फ्लप कार्डहरू तालिकामा छन्, डेलर कार्डहरू बन्द हुन्छन्। तपाइँको उत्तम हातको आफ्नै दुई कार्ड र पाँच फ्लप कार्डहरू बीचको संयोजनद्वारा बनाइएको छ। यो सर्वोत्तम व्यापारीको हातसँग हो। हातहरू एक अर्काको तुलनामा छन् र उच्चतम एक खेल जित्छ।
तपाईं एक अतिरिक्त शर्त बोलाइएको छ जुन AA शर्त भनिन्छ। एक ए.ए. दा शर्त बनाउन को लागी: पहिले, तपाईंलाई हाम्रो एन्ट शर्त निर्धारित गर्न पर्छ; त्यसपछि एए सर्कल क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाइँ शर्त राख्नुहुन्छ। ए.ए. शर्तले तपाइँको दुईवटा कार्ड र तीन फ्लप कार्डहरू गणना गर्दछ, खेलको पहिलो चरणमा निस्क्यो। एए शर्त अन्य सम्झौता परिणाम संग सम्बन्धित छैन। तपाईंले खेल गुमाउन सक्नुहुनेछ, तर ए.ए. शर्तले जित्न सक्छ वा बराबरी हुन सक्छ।
कैसीनो होल्डम अपडेट गरिएको: जनवरी 19, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.2 सुपरमेन 2
2.0.0.4 गुलाबी हात्ती
2.0.0.5 एजटेक साम्राज्य
2.0.0.7 बीसौं वर्षमा
2.0.0.8 बिग5कालो जैक सुन